Ladle Refractories Ndị na-emeputa ihe na ndị na - eweta ya - China Ladle Refractories Factory
Onye nnọchi anya igwe a na agba gharịị maka ihe ndozi ụlọ na-agbanye ọkụ
A na-eji ngwaahịa RMH-LF eme ihe maka ite ọkụ na-emegharị anụ ahụ, a na-eji ngwaahịa RMH-DH mee ihe nchara. Iji ngwaahịa a ga - eme ka ịfụfụ ụfụfụ gabiga n'oge usoro a na - agbaze. Ọ ga --ebelata ụkọ ọkụ nke okpomoku ma mee ka okpomoku kporo ọkụ. Enwere ike ịgbanarị mbibi ihu igwe sitere na ọnụọgụ ọkụ dị elu na oghere, ogologo ndụ nke mkpuchi ga-adị ogologo. Dephosphorization rate ga-adị elu ma oge ịgbaze ga-adị mkpụmkpụ.